[Eng Sub] NOT ME เขา...ไม่ใช่ผม | EP.1 [3/4] - MY - Stindx.com
Number of symbols: 4493
[အထူးကျောင်းသားဟောင်းစကားဝိုင်း] [Tawi Kuerkulsvasti, ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အအောင်မြင်ဆုံး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်] Tawi Kuerkulsvasti ကျွန်တော် ရုရှားမှာနေကတည်းက သတင်းမှာမြင်နေကျ နာမည်ကြီးစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင် Tawi က နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး နိုင်ငံ့စီးပွါးရေးတွေကိုတောင် ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့အပြင် နိုင်ငံစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုပါ ဝင်ပါလို့ရတဲ့အထိ အာဏာရှိတယ် အဲ့ဒါတွေကြောင့် ပြည်သူတွေ boycott တဲ့ နံပါတ်တစ် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာတယ် မင်းဒီနေ့စောသားပဲဟ မင်းဘယ်တွေပျောက်နေတာလဲ ၂ ရက် ၃ ရက်.. ဟမ် Gram ငါဒီနေ့ စောစောနိုးလို့ အဲ့ဒါကြောင့် အရင်ရောက်နေတာ ဒီပွဲ ငါတို့နည်းနည်းဝင်ရှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား အဲ့ကောင်ဘယ်မှာမှ ထုတ်မပြောရဲတော့တဲ့အထိ ဘာရှုပ်မှာလဲ မင်းပြောဖူးသလိုပဲလေ ဒီလိုကောင်မျိုးက သူများတွေဆီကနေ အမြတ်ထုတ်တဲ့ကောင်မို့လို့ တစ်နေ့ဒီကောင် ပြန်ပေးဆပ်ရမှာဆိုပြီးလေ မင်းရေမွှေးသုံးတယ်လား မင်းဘာအရင်စားဦးမလဲ ဒါမဟုတ် အခန်းထဲဝင်တော့မှာလား ဟေ.. မင်းမျက်နှာတွေကြည်လာပါလား အမယ် ကေတွေဘာတွေတောင် ရွှိုင်းလို့ မရွှိုင်းပါဘူး ငါဘာမှမပြောပါဘူး မင်းကို လုပ်ခိုင်းချင်နေတာကြာပြီ ဒါပေမယ့် မင်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူး အော် ငါသိပြီ မင်းဒီလိုအကြာကြီးပျောက်သွားက ဘယ်ကကောင်မလေးနဲ့သွားတွေ့လာတာလဲ ပြောစမ်း မရှိပါဘူး အတန်းထဲသွားရအောင် အခု စာသင်ခန်းဘယ်မှာလဲ သိချင်တယ်ပေါ့ ငါနောက်မှီအောင်လိုက်လေ Gram.. Black
( ဘယ်သူလဲဟ ) ငါတောင် တော်တော်နောက်ကျနေပြီထင်တာ ဆရာက ခုထိမရောက်သေးဘူးလား သူလာပြီး ပြန်တောင်သွားပြီ သူငါတို့ကို Rule Of Law နဲ့ Rule by Law အကြောင်းကြည့်ခိုင်းထားတာ ခဏနေ Quiz လုပ်ရမှာမလို့ ဒီနေ့ Quiz ရှိတာလား အမြဲတမ်းရှိတာပဲလေ မင်းဘာတွေ ထူးဆန်းနေတာလဲ ဒီလောက်ဗလာဖြစ်နေပုံကြည့်ရင် မင်းမေ့နေတာမလား လာငါမင်းကို နွှေးပေးမယ် Rule of Law နဲ့ Rule by law ကဘာတွေကွာခြားမှုရှိလဲ ဖြေကြည့်ပါဦး ပြန်ပြောစမ်းပါ RULE OF LAW နဲ့ RULE BY LAW ကဘာတွေကွာခြားမှုရှိလဲ Of နဲ့ by ကို ထိုင်းလို ပြန်ကြည့်ရင် ဥပဒေရဲ့ လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်မှု နဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်မှု ထင်တယ် မှန်တော့မလို့ Rule of Law ဆိုတာ တရားဥပဒေရဲ့ စိုးမိုးမှု ထိုင်းလိုပြန်ရရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ခေါ်တယ် Rule of Law ရှိတဲ့နိုင်ငံကို ဥပဒေနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်လေ Legal states. ဟုတ်တယ် ဒီစာလုံးကိုအကြာကြီး စဉ်းစားလိုက်ရတာ ပုံမှန် နင်ဒီကိစ္စတွေ မမှားဘူး မဟုတ်လား Black Gramကိုစမ်းနေတာများလား မစမ်းပါဘူး ငါထိုင်းစကားလုံးကို စဉ်းစားလို့သိပ်မထွက်လို့ လာ ဒါဆိုငါ နောက်တစ်ခေါက်နွှေးပေးမယ် Rule of Law ဆိုတာ ဥပဒေသာ အကြီးဆုံး မြင့်မြတ်တယ် ဥပဒေသာ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ် အားလုံးဟာ ဥပဒေအောက်မှာ ညီမျှတယ်
အဲ့တော့မင်းထင်တာ ထိုင်းကရော rule of law ဖြစ်ရဲ့လား ဖြစ်ရမှာပေါ့ မင်းငါ့ကို စောက်ခွက်ပြောင်နေပြီ Black မြင်မြင်နေတာပဲကို ထိုင်းက rule by law ဆိုတာ ဥပဒေကို အသုံးချပြီး လူတွေကိုအုပ်ချုပ်နေကြတာ အာဏာရှိတဲ့လူတွေက ကိုယ့်အကျိုးအတွက် ဥပဒေတွေထုတ် အမြတ်ထုတ်နေကြပြီး ဥပဒေကိုကြိုက်သလို အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ် သူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကို တိုက်ခိုက်နေကြတာ ဒါမျိုးကို စံနှစ်မျိုးထားအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့ ခေါ်တယ်ကွ ဟဲ့ နင်လျောက်ပြောပြီ ထိုင်းဥပဒေက ဥပဒေရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအတိုင်းကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာဟဲ့ ဥပမာ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နင်တစ်ယောက်မကြိုက်ရုံနဲ့ လူအများအတွက် မမျှတဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူး နင်ဥပဒေပညာတက်နေရင် ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့အဖြေပဲပေးရမယ် ပြီးရင် နင်က case by case တစ်ခုချင်း ဆွေးနွေးမှ မှန်မှာပေါ့ ဒါဆို ဒီအချိန်ရဲ့ quiz ကို ငါ တောတောင်ကာကွယ်ရေးရဲ့ သား Ai'Tawiရဲ့ caseကို ပြောမယ် ငါထင်တာ ဒီcase က အသိသာဆုံးပဲ Ai'Tawi က နိုင်ငံပိုင်တောတွေကိုဝယ်ပြီး အိမ်ဆောက်လို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့မှာနေလာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကျတော့ မောင်းထုတ်ခံထိတယ် ဒါမျိုးက လုံးဝ Rule by Law ပဲ ဥပဒေတစ်ခုတည်း ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုပုံ သက်ရောက်ပုံမတူဘူး နေလာပြီးသား ပြည်သူတွေက အာဏာမရှိဘူး အခွင့်အရေးမရှိဘူး ပြောဆိုခွင့်မရှိဘူး အဲ့တော့ မောင်းထုတ်ခံထိတယ် သူတို့ဆီမှာ သူတို့အရင်နေနေတာပါဆိုတဲ့ သက်သေတွေရှိနေမေမယ့်လည်းပေါ့ ဒီမှာ ငါ နင်ပြောတာနားလည်တယ် ဒါပေမဲ့ Khun Tawiဆီမှာ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာရွက်စာတန်းတွေရှိနေတယ်လေ
ပြည်သူတွေဆီမှာ မရှိဘူးလေ နင်သာဒီလိုဖြေရင် အမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး ငါနင့်ကို ဘာမှကူညီပေးလို့ မရဘူးနော် အဲ့လို အမှုမျိုးရှိသေးတာလား အမယ် မသိချင်ယောင်လာဆောင်နေသေးတယ် ငါသိတယ်နော် မင်းငါ့ကို စ နေတယ်ဆိုတာ ငါ့ကိုခြောက်နေတာမလား ဆရာမ လာပြီ အားလုံးအဆင်သင့်ပဲမလား ငါတို့ ပြန်ဆွေးနွေးကြရအောင်နော် quiz မစခင်လေး ကဲ.. မှတ်ထားနော် မှတ်ကြ ကူညီပြီးမှတ်ကြ မှတ်နော်.. မှတ်မိကြတယ်မလား quiz စလိုက်ကြရအောင် ဟိုကောင်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲကွ မင်းဘာလို့အဲ့ကောင်တွေကိုရှာနေတာလဲ ငါ မေးလို့မရဘူးလား ပုံမှန် မင်းဘယ်သူ့အကြောင်းမှ မမေးပါဘူးကွ မင်းဒီနေ့ထူးဆန်းနေတယ် ငါက အဲ့ကောင်နဲ့ ပြောစရာ နည်းနည်းပါးပါးရှိရုံပါ မင်းတို့ ရန်ဖြစ်ကြပြန်ပြီလား ဒီနေ့လည်း ဂိုထောင်မှာပဲရှိမှာ အဲ့ရောက်မှသွားပြောတော့ မင်းဘာလို့ကြောင်နေတာလဲ မင်း ဘီးရော ဘာဘီးလဲ မင်းဆိုင်ကယ်လေကွာ မင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ .. ငါ့ဆိုင်ကယ်နှိုးလို့မရဘူး အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာ ဟမ်! ဒါပေမယ့် မင်း ဒီနေ့ဆိုင်ကယ်သုံးရမှာလေ မင်းမေ့နေတာလား နှိုးလို့မှ တကယ်မရတာ ငါ့ကို ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းမလို့လဲ တည့်ပြော မင်းဘယ်သွားပြီးပြန်လာတာလဲ ငါလည်း ငါ့ကိစ္စနဲ့ငါရှိတယ် မင်းဘာလို့သိချင်နေတာလဲ အေး..
ငါလျှာမရှည်လည်းရတယ် ငါက မင်းဆိုင်ကယ်ကိစ္စမင်းအတွက် ပြသနာကြီးတယ်လို့ထင်မိလို့ မင်းဒီနေ့ကို ပျက်အောင်မလုပ်သင့်ဘူး ဒါဆို ငါနောက်အရင်လိုက်စီးလိုက်ပေါ့ကွာ ရော့ ဘယ်သူ့ဟာလဲ ယူလိုက်စမ်းပါ နောက်မှပြန်ပေးကြတာပေါ့ Ai'Black မင်းငါ့ကိုဒီနေ့ အံ့ဩအောင် အများကြီးလုပ်နေပါလား ဘာလို့လဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဒီတိုင်းလဲကောင်းတာပဲ ငါမင်းကို ဒီလိုကြိုက်တယ် သေစမ်း! မင်း ဘာလုပ်တာလဲ ငါ အိမ်သာသုံးချင်လို့ လာ မလိမ်နဲ့